Waa maxay baabtiis? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Baabtiiska biyo - waa calaamad tawbadkeenka rumaystaha, waa calaamad muujinaysa inuu aqbalayo Ciise Masiix inuu yahay Sayid iyo Bixiyaha - waa ka qaybgalka dhimashada iyo sarakicidda Ciise Masiix. In lagu baabtiiso “Ruuxa Quduuska ah iyo dab” waxaa loola jeedaa shaqada cusboonaysiinta iyo nadiifinta ee Ruuxa Quduuska ah. Kaniisadda Adduunka ee Ilaah waxay ku dhaqantaa baabtiiskiisa iyadoo la baabtiistayo (Matayos 28,19:2,38; Falimaha Rasuullada 6,4:5; Rooma 3,16: 1-12,13; Lukos 1:1,3; 9 Korintos 3,16:XNUMX; XNUMX Butros XNUMX: XNUMX-XNUMX; Matayos XNUMX) , XNUMX).
Fiidnimadii ka hor iskutallaabta lagu qodbay, Ciise wuxuu qaatay kibis iyo khamri wuxuuna yidhi: "... kanu waa jidhkayga ... kani waa dhiiggayga axdiga ..." Markasta oo aan u dabbaaldegno Cashada Rabbiga, waxaan aqbalnaa kibis iyo khamri iyagoo xusuus ah Badbaadiyeheenna oo ku dhawaaqo dhimashadiisa ilaa uu yimaado. Cashada Rabbiga ayaa ah ka qaybqaadashada dhimashada iyo sarakicidda Rabbigeenna, oo isagu jidhkiisa siiya oo dhiiggiisa daadsanaya, in layna cafiyo (1 Korintos 11,23: 26-10,16; 26,26:28; Matayos XNUMX: XNUMX-XNUMX).
Baabtiiskii iyo Cashada Rabbiga waa labada amar ee kiniisadda ee masiixiga ee masiixiga. Amarradanu waa calaamado ama astaamo nimcooyinka Eebbe, oo ku shaqeeya shaqada rumaystayaasha. Waxay si muuqata ugu dhawaaqaan nimcada Ilaah iyagoo ka joojinaya shaqada badbaadada ee Ciise Masiix.
“Labada amar ee kaniisadda, Cashada Rabbiga iyo baabtiiska quduuska ah… wada istaaga, oo garabka iska saar, oo ku dhawaaqa runnimada nimcada Ilaah ee aan shuruudu ku aqbalnay taas oo aan shuruud la'aan ku qasbannahay inaan sidaas dadka kale u noqonno. wuxuu Masiixu innaga noo ahaa ”(Jinkins, 2001, p. 241).
Waa muhiim in la fahmo in baabtiiska Rabbi iyo karaamadiisa aysan aheyn fikradaha aadanaha. Waxay ka tarjumayaan nimcada aabaha waxaana adeegsaday Masiixa. Ilaah wuxuu ku caddeeyey Qorniinka in ragga iyo haweenku ay toobad keenaan (u jeestaan ​​xagga Ilaah - fiiri casharka 6aad) oo la baabtiiso dembidhaafka (Falimaha 2,38: 1), iyo in rumaystayaashu ay "rootiga iyo khamriga ku daraan xusuusta" Ciise waa inay iskood isu taagaan (11,23 Korintos 26: XNUMX-XNUMX).
Amarka kaniisadaha ee Axdiga Cusubi wuu ka duwanaan jiray cibaadooyinka Axdigii Hore iyadoo tan dambe ay ahayd “hooska alaabada mustaqbalka” iyo “Suuragal ma aha in dembiyada laga qaado dhiigga dibiyada iyo riyaha” (Cibraaniyada 10,1.4: XNUMX, XNUMX). Cibaadooyinkaas waxaa loo qorsheeyay inay reer binu Israa'iil ka soocaan adduunka oo ay uga dhigaan hantida Ilaah, halka Axdiga Cusubi uu muujinayo in rumaystayaasha ka soo jeeda dhammaan dadyowga ay kawada tirsan yihiin Masiixa.
Cibaadotii iyo allabarihii loo horseeday inay noqdaan kuwo daahirinta iyo daahirinta joogtada ah. Axdigii hore, axdigii hore oo ay ku dhex shaqaynayeen, ma shaqaynayaan hadda ka dib. Ilaah “wuxuu soo qaadayaa kan ugu horreeya si uu kan labaad u isticmaalo. Sida doonistaasu tahay, waxaa quduus laynagaga dhigay mar keliya iyo dhammaanteen allabariga jidhkii Ciise Masiix "(Cibraaniyada 10,5: 10-XNUMX).
Calaamadaha ka tarjumaya deeqsinimada Eebbe
Filiboy 2,6: 8-XNUMX waxaan ka akhrinaa taas Ciise inuu innagaga tagay xuquuqdiisi rabbaaniga ahaa. Isagu wuxuu ahaa Ilaah, laakiin wuxuu bini aadam u noqday badbaadadeenna. Baabtiiska Rabbiga iyo karaamada ayaa muujinaya wixii Eebbe noo sameeyay, ee ma aha waxaan u sameynay Ilaah. Qofka rumaysadka leh, baabtiisku waa muujinta dibedda ee waajibaadka gudaha iyo cibaadada, laakiin waa tan ugu horraysa uguna muhiimsan kaqayb qaadashada jacaylka Ilaah iyo u hibeynta aadanaha: waxaa lagu baabtiisay dhimashadii Ciise, sarakiciddiisa iyo u dabbaaldegaan.
“Baabtiisimadu maahan wax aannu qabanno, laakiin waa maxay wixii noo qabsoomay” (Dawn & Peterson 2000, p. 191). Bawlos wuxuu sharraxayaa: “Mise ma waydaan ogayn in kulli inteenna lagu baabtiisay Ciise Masiix lagu baabtiisay dhimashadiisa?” (Rooma 6,3).
Biyaha biyo la baabtiiso oo rumaystaha ayaa ka dhigan aaska Masiixu isaga ama ayada. U soo bixitaanka biyuhu waxaay astaan ​​u tahay sarakicidda Ciise iyo kor u qaadistiisa: "... sida Masiixu uga soo sara kiciyay xagga ammaanta aabaha, annaguna waan ku dhex socon karnaa nolol cusub" (Rooma 6,4: XNUMXb).
Sababtoo ah astaamaha ah inaan gebi ahaanba biyo daboolayno oo aan matalno "inaan la aasay iyada oo lagu dhex baabtiisay baabtiiskii dhimashada" (Rooma 6,4: XNUMXa), Kaniisadda Adduunka ee Ilaah waxay ku dhaqmeysaa baabtiiskiisa iyada oo gebi ahaanba la gelayo. Isla mar ahaantaana, Kaniisaddu waxay aqoonsan tahay qaabab kale oo baabtiis ah.
Calaamadda baabtiiska ayaa ina tusaysa “in odaygeennii la iskutallaabta lagula qodbay isaga si jidhkii dembigu u baabba'o si aynaan mar dambe dembiga ugu adeegin” (Rooma 6,6: 6,8). Baabtiisku wuxuu ina xusuusinayaa in sidii Masiixu u dhintay una soo sara kacay, inaguna aan xagga ruuxa kula dhimannay oo isaga la laynay (Rooma 5,8: XNUMX). Baabtiisku waa muujinta muuqata ee Eebbe ee uu ina siiyay wuxuuna muujinayaa “in Masiixu innaga u dhintay markii aan weli dembilayaal ahayn” (Rooma XNUMX: XNUMX).
Cashada Rabbiga sidoo kale waxay ka marag kacaysaa jacaylka allabari ee Ilaah, ficilka ugu sarreeya ee badbaadada. Astaamaha la adeegsaday waxay metelaan jirka jaban (rootiga) iyo dhiigga daadatay (khamriga) si aadanaha loo badbaadiyo.
Markuu Masiixu aasaasay Cashada Rabbiga, ayuu xertiisii ​​la qaybsaday oo wuxuu ku yidhi, "Qaata, cuna oo tanu waa jidhkayga laydinku siin doono [jabtay]" (1 Korintos 11,24:6,48). Ciise waa kibista nolosha, "Kibista nool ee samada ka timid" (Yooxanaa 58: XNUMX-XNUMX).
Ciise wuxuu kaloo gacantii siiyey oo yidhi: "Cab oo dhan, kani waa dhiiggayga axdiga, kan kuwo badan loogu daadshay dembidhaafka" (Mt 26,26-28). Tani waa "dhiigga axdiga weligiis ah" (Cibraaniyada 13,20:10,29). Sidaa darteed, adiga oo iska dhega tiraya, dayacaya ama diidaya qiimaha dhiigga axdigan cusub, ayaa ruuxa nimcada lagu xadgudbay (Cibraaniyada XNUMX:XNUMX).
Sida baabtiisku u yahay ku dayasho soo noqnoqota iyo ka qayb qaadashada geerida iyo sarakicista Masiixa, sidoo kale Cashada Rabbiga ayaa ah soo noqnoqoshada iyo ka qayb qaadashada jidhka iyo dhiigga Masiixa ee naloogu deeqay.
Su'aalaha ku saabsan baasaboorka ayaa su'aal ka keenay. Iidda Kormaridda lama mid aha Cashada Rabbiga waayo calaamadaha waa ka duwan yihiin iyo sababta oo ah ma meteleyso dembidhaafka nimcada Ilaah. Iiddii Kormaridda sidoo kale waxay ahayd cadad sanadle ah, halka Cashada Rabbiga “waa la qaadan karaa had iyo jeer markaad kibistan cuntaan oo aad koobka ka cabtaan” (1 Korintos 11,26:XNUMX).
Dhiigga Wanka Kormaridda looma daadin si loo cafiyo dembiyada maxaa yeelay allabaryada xayawaanku weligood ma qaadi karaan dembiyada (Cibraaniyada 10,11:2). Caadada cunidda Kormaridda, oo ah habeen baraarug ah oo lagu hayo diinta Yuhuudda, waxay astaan ​​u tahay xorriyadda qaran ee Israel laga soo bilaabo Masar (Baxniintii 12,42; Sharciga Kunoqoshadiisa 5); kama dhigna cafiska dembiyada.
Dembiyadii reer binu Israa'iil laguma cafiyin dabaaldeggii Kormaridda. Ciise waa la dilay isla maalintaas wankii Iidda Kormaridda la gowracay (Yooxanaa 19,14:1), taas oo ka dhalisay Bawlos inuu dhaho: "Waayo, innaguna waxaynu leennahay Wankii Iidda Kormaridda, kanu waa Masiixa la gawracay" (5,7 Korintos XNUMX: XNUMX).
Wadajirka iyo bulshada
Baabtiiska Rabbi iyo karaamada ayaa sidoo kale ka tarjumaya midnimada midba midka kale iyo Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah.
Iyada oo loo marayo “Sayid keliya, hal iimaan, hal baabtiis” (Efesos 4,5: 6,5) rumaystayaasha “waxay ku xirnaayeen isaga, oo waxay la mid noqdeen dhimashadiisa” (Rooma XNUMX: XNUMX). Marka rumayste la baabtiiso, Kaniisaddu waxay aaminsan tahay in isaga ama iyadu heshay Ruuxa Quduuska ah.
Markii la helo Ruuxa Quduuska ah, Masiixiyiinta waxaa lagu baabtiisaa bulshada kaniisada dhexdeeda. "Waayo, kulligeen waxaynu isku baabtiisay isku jidh qudha, inaynu nahay Yuhuud ama Gariig, ama addoomo ama xor ah, oo kulligeenna isku jidh baa lagu wada dhagaystay" (1 Korintos 12,13:XNUMX).
Ciise weligiis iskama dhaafi doono ama dayacin doono wada noolaanshaha kiniisadda, taas oo ah jidhkiisa (Rooma 12,5: 1; 12,27 Korintos 4,1:2; Efesos 13,5: 28,20-1) (Cibraaniyada 10,16: 17; Mt XNUMX:XNUMX). Kaqeybgalka firfircoon ee bulshada masiixiga waxaa dib loo xaqiijinayaa iyadoo rooti iyo khamri laga cuni karo miiska Rabbiga. Khamrigu, oo ah ujuuradda barakada, ma aha oo keliya “bulshada dhiigga Masiix” iyo rootida, “bulshada jidhka Masiixa”, laakiin sidoo kale waa ka qaybgalka nolosha wadaagga ee rumaystayaasha oo dhan. "Haddaba innagu waxaynu nahay jidh qudha maxaa yeelay dhammaanteen waxaynu wada qaybsanaa kibis" (XNUMX Korintos XNUMX: XNUMX-XNUMX).
Cashada Rabbiga iyo baabtiisuba labaduba waa muuqaalo muuqata oo ku aaddan cafiska Eebbe. Markuu Ciise xertiisii ​​faray inay ku baabtiiso meel kasta oo ay aadaan magaca Aabaha, Wiilka, iyo Ruuxa Quduuska ah (Mt 28,19:2,38), waxay ahayd tilmaam ah in rumaystayaasha la dhex keeno bulshada kuwa helay cafiska baabtiisay. Falimaha Rasuullada XNUMX:XNUMX waxay sharraxaysaa in baabtiisku "yahay cafiska dembiyada" iyo helitaanka hadiyadda Ruuxa Quduuska ah.
Markaynu “Masiixa la soo sarakacay” (oo ka soo sara kaco biyaha baabtiiska baabtiiska cusub ee Masiixa), waa inaan is cafinaa sidii Sayidku inoo cafiyey (Kolosay 3,1.13:4,32, XNUMX; Efesos XNUMX). Baabtiisku wuxuu la macno yahay inaan cafis helno sidoo kale helno cafis.
Cashada Rabbiga mararka qaar waxaa loo yaqaanaa "wadaagis" (adkeynta fikirka ah in aan wehel u nahay Masiixa iyo rumaystayaasha kale astaamo). Waxaa sidoo kale loo yaqaan "Eucharist" (oo ka timid Giriigga 'mahadnaq "sababtoo ah Masiixu wuxuu ku mahadnaqay ka hor intuusan kibis iyo khamri siin).
Markaynu isugu nimaadno qaadashada khamriga iyo kibista, waxaan si qiiro leh ugu dhawaaqaynaa dhimashada Rabbigeenna dembidhaafkeenna ilaa Ciise uu soo noqonayo (1 Korintos 11,26:XNUMX) oo waxaan la wadaagnaa wadaagista quduusiinta iyo Ilaah. Tani waxay ina xusuusineysaa in cafiska macnihiisu yahay inaan wadaagno macnaha allabari Masiixa.
Waxaan khatar ugu jirnaa haddii aan u xukumno dadka kale inaysan u qalmin cafiska Masiixa ama cafiskeena. Masiixu wuxuu yidhi, ha xukumin si aan laydin xukumiin (Mt 7,1: 1). Taasi ma wuxuu Bawlos ku tilmaamayaa 11,27 Korintos 29: 5,23-24? Taasi haddii aan cafiyin, ma kala saareyno ama ma fahmin in jidhka Rabbi uu u jabi doono dembidhaafka qof walba? Markaa hadaan u nimaadno meesha karaamada, oo aan qadhaadh nahay oo aan cafiyin, markaa waxaan cunnaa oo cabnaa walxaha si aan munaasib ahayn. Cibaadada saxda ah waxay la xiriirtaa dejinta cafiska (eeg sidoo kale Mt XNUMX: XNUMX-XNUMX).
Ilaahay ha cafiyo had iyo jeer sidaan u qaadano karaamada.
Baabtiiska Rabbiga iyo karaamadiisa waa ficillada kaniisadaha ee cibaadada shaqsi ahaaneed iyo wadaaga oo si muuqata u muuqata injiilka nimcada. Waxay quseeyaan qofka rumaystaha ah maxaa yeelay Masiixa laftiisa ayaa lagaaga dhigay Qorniinka Quduuska ah, waxayna yihiin wadooyinka si firfircoon uga qaybqaadashada dhimashada iyo sarakicidda Rabbigeenna.